DAGAALKA PUNTLAND OO SII FIDIYA !
Qardho, 30ka December 2002
Dagaal ba’an oo loo adeegsaday hubka cul-culus ayaa aroornimadii saaka oo Isniin ah( 30/12/2002 ) ku dhex maray maleeshiyo kala taabacsan Col. Cabdullahi Yuusuf iyo kuwa taageersan G/Sare Jaamac Cali Jaamac tuulada Jeedad oo u jirta qiyaastii 60 Km magaalada Qardha ee Gobolka Puntland .
Waxaana wararka ka imaanaya magaalada Qardho ay sheegayaan in Ciidanka Jaamac Cali Jaamac oo uu abaanduule u yahay General Cadde Muuse ay gacanta sare ku yeesheen dagaalkii maanta , iyagoo gacanta ku dhigay hub ,saanad iyo maxaabiis , walow ay labada dhinacba soo gaareeen dhimasho iyo dhaawac badan .
Waxay kaloo wararku sheegayaan in Col. Cabdullahi Yuusuf Axmed uu iminka ku sugan yahay tuulada Xamdu-lilaahi , isagoo ka dhowraya magaalada Boosaaso ciidan hor leh , si uu u soo ceshado libta maanta laga helay . Waxaana hubaal ah xeeladda dagaal ee uu u adeegsaday General cadde Muuse iska hor-imaadkan inuu ahaa mid difaac u badan oo meelmar noqday .